၁၆:၁၄၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၁၈၉၃၀ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
→‎ကရ်မ ( ကံနှင့် ကံ၏အကျိုး)
၁၆:၁၂၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန်)
KaungKhantNaing03 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
(→‎ကိုးကွယ်သည့် ဘုရား နှင့် နတ်ဒေဝါမျာ: ဟိန္ဒူဘာသာနှင့် မကိုက်ညီသော စော်ကားထားသည်များ ပါ၀င်နေသည်။)
စာတွဲများ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၁၆:၁၄၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန်)
(→‎ကရ်မ ( ကံနှင့် ကံ၏အကျိုး))
စာတွဲများ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
ကံနှင့် ကံအကျိုး သည် မည်သို့ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ ကောင်းသော ကံနှင့် မကောင်းသော ကံ အကြောင်း၊ ကံသုံးမျိုး ကရ်မ၊ ဝိကရ်မ နှင့် အကရ်မ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း ။အလုပ်လုပ်သော်လည်း အလုပ်မမြောက်သော အလုပ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ကံနှင့် ကံ၏ အကျိုးမှ ကင်းသွားနိုင်သော နည်းလမ်းများ ရှိပါသလား။ ညံ့နေသော ကံကို ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါသလား။ ဘုရားရှင် အားကိုးကွယ်ဆည်း ကပ်ခြင်းဖြင့် ကံနှင့် ကံ၏ အကျိူးမှ လုံး၀ ကင်းပြတ်သွားပြီး သံသရာမှ လွတ်နိုင်သလား။ ကောင်းမှု လုပ်ရုံဖြင့် သံသရာမှ လွတ်မြောက်မည်လား။ စသည့် အကြောင်းအရာ များစွာကို တွေ့ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ( အသေးစိတ် သိရှိဖတ်ရှုလိုပါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကရိသ်ျှဏ အနုဿတိ အသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) ISKCON (Myanmar) မှ ထုတ်ဝေထားသော ဘဂဝဒ်ဂီသာကျမ်း(မြန်မာပြန်) ကို ဖတ်ရှု လေ့လာ နိုင်ပါသည်)
=="Hindu ဘာသာနှင့် လူတန်းစား၄ရပ် (ဇာတ်စနစ်၄ပါး)...အကြောင်းပြည့်စုံစွာ .................
Bhagavat Gita အပါဝင်ကျမ်းစာများအရ လူတန်းစား၄ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပုံ
အရာခပ်သိမ်းသည် ဘုရားမြတ်ထံမှ ပဋိသေန္ဓယူသည်ll အရာခပ်သိမ်း ဘုရားမြတ်ကြောင့်တည်ရှိပြီး အရာခပ်သိမ်းပျက်သုံးက ဘုရားမြတ်ထံသာခိုနားရလေသည် ll
ဘုရားရှင်သည် လေးမည်သော လူတန်းစားများ ဖန်တီးတော်မူသည်
ကောင်းမြတ်သောဂုဏ် ဂုရု အာရ်ကျရ်ယ ဖြစ်သောကြောင့် Brahmanအားပါးစပ်တော်မှ ဖန်ဆင်းတော်မူသည် ll ဒုတိယမှာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရသည့်တာဝန်ရယူသူ ရမ္မဂုဏ်၌တည်ရှိသော kshatriyas များအား လက်မောင်းတော်မှဖန်ဆင်းတော်မူသည်llတတိယမှာ အဝိဇ္ဇာဂုဏ်နှင့် ရမ္မက်ဂုဏ်ရောနှောနေသော ကုန်သည်Vaishyas များအားဗိုက်တော်မှဖန်ဆင်းတော်မူသည် ll
စတုတ္ထမှာ အဝိဇ္ဇာဂုဏ် ရှိသော Shudras များအား ဘုရားရှင် ပဒုမ္မာခြေတော်မှအသီးသီးဖန်ဆင်းလေသည်ll
(Bhagavat gita. Chapter 4,sholak 14)
(Rig veda,Bhagavatam )
လူတန်းစားလေးရပ်ဟာ ဘုရားရှင် ခြေတော်မှဖြစ်လို့ ပါးစပ်တော်မှဖြစ်လို့စသဖြင့် ခွဲခြားဖို့မလိုပါ ဘုရားရှင်အားဖူးမြော်ပါကလည်း မျက်နှာအားတည့်တည့်မဖူးမြော်ရပဲ ပဒုမ္မာခြေတော်မှ စတင်အထက်သို့ အပေါ်တဖြေးဖြေး ဖူးမြော်ရပါတယ် ဘုရားရှင်ခန္ဓာက အန္တမင်္ဂလာတွေထုတ်ပေးနေသော ပ်ရမတ် ကြီးပါ ဒီတော့ဘုရားရှင်အဖို့ အစိပ်ပိုင်းမှန်သမျှဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဟူသည် နှိုင်း၍ပင်မရပါ အကယ်၍ လူတန်းစား၄ရပ်ကိုဖိနှိပ်နေသူရှိလျှင်ထိုသူဟာ ဘုရားရှင်ခန္ဓာတော်အား အကန့်သတ်ဖြင့် ဖိနှိပ်နေသူသာလို့ မှတ်ယူ၍ရနိုင်ပါတယ် ll
(Rig veda 5.59.6)မှာလည်း လူဆိုတာအယုတ်အလတ်အနိမ့်အမြင့် မရှိဘူး မိမိကြိုးစားမှုကြောင့်သာမိမိ မောက္ခရောက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်ll
(Bhagavat gita chapter 18,shlok41) မှာလည်း
လူတန်းစား၄ရပ်မှာ သဘာဝတရား၏ဂုဏ်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ ရရှိထားသောမိမိပင်ကိုယ် အရည်ချင်းများအပေါ်သတ်မှတ်မူတည် ခွဲခြားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ll
(Bhagavat gita chapter 9.sholak32)မှာ အို ပရိဿ၏သားတော် အမျိုးသမီးများ လူတန်းစား၄ရပ် တို့သည် ဇာတိအရနိမ့်ကျသူများဖြစ်စေ ငါဘုရားထံခိုလှုံပါက ၎င်းတို့သည် အနှိုင်းမဲ့ပန်းတိုင်သို့ရောက်မည်ဟု ဟောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာll
(Rig veda 10.10.11-12 ,yajur veda 31.10-11,
Atharvaveda 19.6.5-6) တို့မှာလည်း မနုဓမ္မသတ်ကျမ်းသည် မွေးဖွားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်အယူစနစ်ပင်မရှိသောခေတ်မှစတင်ခဲ့ပြီး
manu ဓမ္မသတ်ဟာလည်း မွေးဖွားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့် မျိူးနွယ်အယူစအားလည်းလက်မခံပေ manu ဘုရင်သည်လည်း veda ရဲ့လှုံဆော်မှုရယူထားသူပီပီ မွေးဖွားခြင်းမှစမျိုးရိုး​ဖြစ်တည်ခြင်းကိုလက်မခံကြောင်း ပြသထားခဲ့သည်ll
ဘုရားရှင်ဟာ ဘဂဝတ်ဂီသာမှာ ခွဲခြားမှုမရှိဖို့ ဒီလိုဟောကြားထားပါသေးတယ် (chapter.5 sholak 18)အရ မာန်မာနကင်းသောသူတော်စဥ်သည် စစ်မှန်သောဥာဏ်ပညာကြောင့်ပညာရှိ၍ ယဥ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ဗြဟ္မဏ၁ဦးlနွား၁ကောင်lဆင်၁ကောင်lခွေး၁ကောင်နှင့်ခွေးသားစားသော ကျန္ဓာလတို့အား သမာသဘာဝတူညီစွာမြင်သည်ll
(bhagavat Gita . Chapter 10.sholak 20)မှာလည်း ခပ်သိမ်းအပေါင်း အစ အဆုံး အလယ် အရာရာသည် ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ဟောကြားထားပါတယ်ll
ဘုရားရှင်ပါးစပ်၌ဖန်ဆင်းခံရသော Brahman များဟာ လောကီလောကုတ္တရာသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများဖြစ်ပြီး သြဝါဒများ ဓမ္မနှင့်အညီနေထိုင်စေရန်များ သင်ကြားပြသသောဆရာဖြစ်သဖြင့် ၎င်းတို့တို့သင်ကြားမှုလက်ခံထားသူတို့ဟာ ပညာဝမ်း နှင့် လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအစာဝမ်း ပြည့်တင်းနိုင်ပါသည်ll
လက်ရုံးတော်မှဖန်ဆင်းခံရသောkshatriyas များဟာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း အပိုင်းကိုတာဝန်ကို ယူဆောင်ထားရပါသည်၎င်းတို့ဟာ လူသားများ lနိုင်ငံတော် များကိုကာကွယ်ပေးမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ကာ လောကုတ္တရာတရားများကို ကျင့်ကျံပေါက်ရောက်နိုင်ပါသည်ll
ဗိုက်တော်မှ ဖန်ဆင်းခံရတော်မူသော vaishyas များဟာ ကျွန်တော်တို့စားသုံးဖို့ အစားစာများ အသုံးဆောင်များ လဲလှယ် ရောင်းချပေးပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာနှင့် ရန်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ပြည်သူများဘဝတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးသူများဖြစ်ပါတယ် ll
ခြေတော်မှဖန်ဆင်းခံရတော်မူသောshudars များမှာမူ ရွှံ့lဗွက်lနွံ တွင်းဆင်းသက်အပင်ပန်းခံကာ လူသားများရပ်တည်မှုပေါ် အင်မတန်အပင်ပန်းခံ ကြိုးစားအားထုတ်သူများဖြစ်သည် ll
(Sama veda, Rig veda)
ဘုရားရှင်ခန္ဓာမှာ ပွင့်ထွန်းလာပြီး၎င်းတို့လုပ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့် အကျိုးအရာများ
Brahman ဟာ ပါးစပ်တော်မှ ပွင့်ထွန်းလာပြီး ကျွန်တော်တို့ကို အပြောအဆို ယဥ်ကျေးမှု စသည်ဖြင့် သင်ကြားပေးကာ လူသားများ ပညာဝမ်းပြည့်တင်းအောင် ပညာကျွေးသူများပင်ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် ပါးစပ်နှင့် နှိုင်းယှဥ်ထားသည်ကားမဟုတ်ပါလောll ထိုသူများမရှိက လူသားတွေအသိဥာဏ်ပင်မဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ll
Kshatriyas များဟာ လက်ရုံးတော်မှပွင့်လာပြီးကာကွယ်မှုအပိုင်းတာဝန်ယူထားလေသည် ကျွန်တော်တို့ဟာ မိမိကိုတိုက်ခံလာလျှင် မိမိလက်ဖြင့်ခုခံသကဲ့သို့ ထိုမျိုးနွယ်များဟာလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့လက်မောင်းများ ပင်ဖြစ်ပါတော့သည် ll ထိုသူများမရှိပါက ကာကွယ်မှုအားမရှိကာ ပြဿနာများကြုံရပါလိမ့်မည်ll
Vaishyas များဟာဝမ်းဗိုက်နေရာမှပွင့်လာပြီးအစာတည်ရှိသောဝမ်းဗိုက်တာဝန်ယူထားသူပီပီ အစားစာတွက်ကုန်သွယ်ပေးမှုကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည် llထိုသူများမရှိပါက လူသားများ စားချင်သည်များမစားရက အာဟာရချို့တဲ့ကာနောက်ဆုံးအသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်ll
Shudras များဟာ ပဒုမ္မာခြေတော်မှဖန်ဆင်းခံသည့်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး လူသားဘဝရပ်တည်ဖို့အတွက် အောက်ခြေ ဖောင်ဒေးရှင်း များသာဖြစ်ပါတယ် llထိုသူများမရှိပါကလည်း လောကကြီးဟာညစ်ပတ်မှုအပေါင်းခငြောင်းဟာ လူတန်စား၄ရပ်လုံးမနေသင့်ဖွယ်နေရာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ll indiaကဗျာဆရာ ဘုန်းတော်ကြီးများဟာလည်း Shudras မျိုးရိုးကို ဆွယံန်းစေဝက်သ်(ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်)ဟုခေါ်ဆိုပြီး လူတန်းစားလေးရပ် ရပ်တည်ဖို့ အခြေခံနေရာပင်ဖြစ်ပါသည် ဟု ချီးကျုးဂုဏ်ပြုကြပါသည် ll ယခင် ရာစုများအတွင်း လူများဟာ ဘုရားစကားနားမထောင်ပဲ Shudras များပိုနှိမ့်ချခဲ့သည်များရှိပါသည် အမှန်မှာ ထိုသို့နှိမ့်ချသူများလည်း shudras များ ရဲ့ကူညီမှုရယူထားသူပါပဲ ll
အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန် များတွင်လည်း ကျမ်းစာများအရ မျိုးနွယ်စနစ်များရှိသလား
ကျမ်းစာများအရ အပင်ဟာလည်းအသတ်ရှိသဖြင့် မျိုးနွယ်ဇာတ်များရှိပါသည်
Brahmanမျိုးနွယ်အပင်များဟာ Tulasi lညောင်ပင်l နံ့သာဖြူပင် etc...စသည်တို့ဖြစ်ကြသည် ll
Kshatriyas မျိုးနွယ်အပင်များဟာ ကျွန်းl နံ့သာနီl ဝါဂွမ်း etc...အပင်တို့ဖြစ်ကြသည်ll
Vaishyas မျိုးနွယ်အပင်များဟာ သရက်ပင်lတောင်သလဲသီးပင်l ပိန္နဲပင်တို့ဖြစ်ကြသည်ll
ဓနိ အပင် etc...စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်ll
Brahman မျိုးနွယ်တိရိစ္ဆာန်များမှာ ဆိတ် etc...
Kshatriyas မျိုးနွယ်တိရိစ္ဆာန်များမှာ ခြင်္သေ့ lကျားlကျားသစ် etc...
Vaishyas မျိုးနွယ်တိရိစ္ဆာန်များမှာ နွားlကျွဲ etc...
Shudras မျိုးနွယ်တိရိစ္ဆာန်များမှာ မြင်းlကုလားအုတ် etc...
ကျမ်းစာအရ Davata များမှာလည်း မျိုးနွယ်၄မျိုးရှိပါသေးတယ်
Sanatသ် kumarရ်တို့သည် brahman မျိုးနွယ်........
Indra(သကြားမင်း)lvaruna (ဝါရုဏ)နှင့် Rudra တို့သည် Kshatriyas.........
Ganesh(ဂနေရှ့်ဘုရား)နှင့် vasu dev တို့သည် vaishyas.........
Puu shar dava သည် Shudras ...စသည်တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ll
၁၆:၀၉၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC) ၁၆:၀၉၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)[[အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/69.160.26.228|69.160.26.228]] ၁၆:၀၉၊ ၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)
အမျိုးနွယ်၄ခုဟာ သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်အကျိုးပြုသော ကဏ္ဍမှပါဝင်လေသည် ပုံစံအကျိုးပြုမှုမတူသော်လည်း အကျုံးဝင်မှု အားထုတ်မှု ကိုယ်ကျိုးမငဲ့သည်များကြောင့် ထပ်တူညီသဖြင့် အခွင့်ရေးမျှမျှတတရှိသဖြင့် ဤ စနစ်ကား သိပ္ပံနည်းကျအမြင်ဖြစ်သည် ll
မနုဓမ္မသတ်ကျမ်းအရလဲ လူဆိုတာမွေးမွေးချင်းShudras အနွယ်ပဲမိမိလုပ်ရပ်ကြောင့် သာ​အမျိုးနွယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ် စိတ်ဓာတ်အင်မတန်ယုတ်ညံ့ ရိုင်းဆိုင်းနေသူသည်လည်း စဏ္ဍာလ ခွေးသားစား အနွယ်ဝင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားနိုင်သလို Brahman လိုစိတ်ထားနူးညံ့ပြေပြစ် ဓမ္မနဲ့အညီနေထိုင်သူဟာလည်း Brahman အနွယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျမ်းစာများကအတိအလင်းပြသထားပါတယ်ll
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/574583" မှ ရယူရန်